computer Double-nidaamka mishiinka tolida flat - Shiinaha Taizhou Boding Makiinado
Computer mashiinka tolida flat
Shoes vamp sare Mashiinka qaadashada
Double-nidaam computer mashiinka tolida flat
DZ252S waa 52 inches la qaadee hal nidaam double duuban hal, devicde la duuban kor-meel gaadhsiisnayn shuruudihii xiisad waayo, tolida qayb .Equipped nidaamka alarm Baadhista infrared ah, wax ku ool ah looga fogaado kartaa maqan alarm iyo irbad hit ah. Tani deviced barnaamijka smart oo shidma infrared kaliya ogaado meesha tolida in ay ka fogaadaan naxdinta daahid ah. Dib u noqo si wadajir ah ay gacanta ku motor labanlaabo, la kordhiyo xawaaraha qaadee soo laabashada iyo wax soo saarka iyo sidoo kale ka fogaada madhay ee ...
DZ252S waa 52 inches la qaadee hal nidaam double duuban hal, devicde la duuban kor-meel gaadhsiisnayn shuruudihii xiisad waayo, tolida qayb .Equipped nidaamka alarm Baadhista infrared ah, wax ku ool ah looga fogaado kartaa maqan alarm iyo irbad hit ah. Tani deviced barnaamijka smart oo shidma infrared kaliya ogaado meesha tolida in ay ka fogaadaan naxdinta daahid ah. Dib u noqo si wadajir ah ay gacanta ku motor labanlaabo, la kordhiyo xawaaraha qaadee soo laabashada iyo wax soo saarka iyo sidoo kale ka fogaada madhay ee tareenka alaabtii.
Iyadoo technology digital, oofiya nidaamyada kala iibsiga, pointel, lafaha misgaha, intarsia, jacquard, Caraabaah jersery double, qaab qaab qarsoon Muuqda iyo hawlaha kale ee tolida hannaanka caadiga ah. Xidhantay hal ama laba jibbaar maaliyada aasaasiga ah, multi-midabada aan caadi ahayn jacquard, intarsia, fiilooyinka, dhar pointel. Ku haboon Xariir, fiber kiimikada, iyo suufkayga, fiber acrlic, dun isku qasan, dun cudbi ah in xidhantay ah funaanad, collar, placket, daraftiisa, cabbire, safaleeti, jeebka, surwaal, iyo dhar tolida kale.
eeg 5 / 7G 7G 9G 10G 12G 14G 16G
Irbadaha / Width 364needles / 52inches 364needles / 52inches 468needles / 52inches 520needles / 52inches 624needle / 52inches 728needles / 52inches 832needles / 52inches
Function Main Xidhantay maaliyada aasaasiga ah hal ama laba jibbaar, aan joogto ahayn multi-midabyada, jacquard, intarsia, fiilooyinka, dhar pointel haboon Xariir, fiber kiimikada, iyo suufkayga, fiber looxa, dun isku qasan, dun cudbi ah in xidhantay funaanad, collar, placket, daraftiisa, cabbire, safaleeti ah , jeebka, surwaal, iyo, dhar tolida kale.
System tolida Single qaadee nidaamka double ama saddex nidaamka, iyadoo la adeegsanayo farsamada digital, oofiya nidaamyada kala iibsiga, pointel, lafaha misgaha, intarsia, jacquard, Caraabaah jersery double, qaabka appaent, qaab qarsoon iyo hawlaha kale Tolidda hannaanka caadiga ah.
Speed ​​tolida Max xawaaraha tolida 1.6m / S. 32 qaybaha xawaaraha ay gacanta ku motor Howlsocodsiinta.
Sitch Mugga 64 cufnaanta kala duwan oo doorashada 0-650 gacanta sarre motor, ganaax korontada qabsato technology.
dynamic dhejiya Deviced by technology Tolmada firfircoon, gaadho tolay kala duwan ee hal koorso oo kala duwan cufnaanta ee hal koorso si loo hagaajiyo efficency kniing oo kala duwan.
kala iibsiga feeraha transter Free siyaabo double dhexeeya hore iyo eedle dib isku mar iyo xad lahayn by dhaqdhaqaaqa qaadee. Bedelka iyo xidhantay gaar ah.
Sinker Stepping gacanta motor sinker u hagaajin karo si loo gaaro qaabeynta u badan iyo shaqada ballaarinta.
Single Or Double Rackings Motor xirtey drive, gaadho 1/2 ama 1/4 irbad xirtey at boos kasta. max acking Double 2.5 inches hal dhinac oo dhinac double ugu badnaan 5 inches, deviced on mashiinka 5G, 7G, iyo 5 / 7G. 2inches max xirtey Single, deviced on 9G, 12G, 14G, iyo mashiinka 16G.
Return Xawaaraha Sare Dib u noqo joine gacanta ku motor labanlaabo, la kordhiyo xawaaraha qaadee soo celinta iyo productiviy sidoo kale ka fogaada madhay ee tareenka alaabtii.
Device rullaluistemadka DZ252S deviced la soo dejiyo shanlo iyo rullaluistemadka kor-meel, DZ252S deviced la oller kor-meel, 24sections of control si toos ah la qabsiga hoosaadka .Bal musbaar madax ballaaran ugu fiican hoos ka mid ah dhar iyo waxyaabaha looga baahan xiisad waayo, tolida portionable ah.
rullaluistemadka dun rullaluistemadka dun wanaagsan si hufan loo xakameeyo xiisad te duntii si gurantee tayada dhar ah.
Carrier dun 2 * 8 sidayaal dun deviced on 4 kooxood double keeni tareenka.
Ammaanka cover mashiinka Full si loo yareeyo ciidda ad noice. shidma Cover, button deg-deg ah, qalab awood off iyo tilmaame in la damaanad qaado amaanka.
auto Stop Machine stop auto marka fasax dun, wadajir dun xayiran, dhar duudduuban gudaha, irbad hit, dollar, Baadi barnaamijka iyo dhamaadka barnaamijka dhacaya.
irbad baare Qalabaysan nidaamka alarm Baadhista infrared, wax ku ool ah looga fogaado kartaa maqan alarm iyo irbad hit ah.
System computer monitor LCD, screen taabashada, interface garaafyada, USB iyo imput net, RAM 1GB kaydinta file weyn.La soco: xogta Working, dhejiya xogta indhaha iyo hagaajin karo inta lagu jiro saarka hawlgalka ku haboon.
nidaamka barnaamijka iyo nidaamka kombiyuutarka mishiinka sahlan si aad u cusboonaysiiso iyo taageero Kornayl / HCD / file hannaankii OOO.
hawlgalka af nidaamka Multiple ka mid ah Shiinaha, Ingiriisiga iyo luqadaha kale.
file Input USB iyo net
Power Off Memory Deviced technology CMOSka sare, marki ay korontada go'day dhici xogta tolida iyo file waa la badbaadiyey, waayo, tolida qeybtii labaad.
Connection Net xawaaraha sare (Ethernet), ugu badnaan xirmaan 254 mashiinada for aqbasho file si ay u gutaan monior iyo wadaagidda macluumaadka.
aragti (Nidaamka Double) L * W H * 2915 * 940 * 2010mm, (Saddex hab) L * * W H3015 * 940 * 2010mm
Previous: Single-nidaam computer mashiinka tolida flat
Next: kabaha Saddex-habka vamp sare Mashiinka qaadashada
144n 6f sharaabad Computerized Machine Dejinta
Auto flat xidhantay Machine
Cidhibta Auto Sare-Qaylkiisa Machine
Automatic Flat Tolidda Machine
Automatic aan xuduud lahayn Glove Tolidda Machine
Automatic sharaabad Tolidda Machine
X6 Automatic Machine Jarida
Backpart wax taaj oo kale Machine
Cap Tolidda Machine
kaarbadka Tolidda Machine
Machine Price Cheap Waayo Home Isticmaal
Collar Flat Tolidda Machine
Machine Making Collar
Compuiter funaanad Machine
Computeized Flat Tolidda Machine
Computer Control Tolidda Machine
Computer la kontoroolo Tolidda Machine
Machine Computer Flat xidhantay Sinker
Computer Flat Tolidda Machine
Computer Flat Tolidda Machine Waayo, Daad
Computer Flat sharaabad Tolidda Machine
Computer Tolidda Machine
Computerized Bed Flat Machine Tolidda
Computerized Jacquard Tolidda Machine
Computerized safaleeti Flat xidhantay Machine
Mashiinnada texeen Computerized
Yaxaaska het Tolidda Machine
Dhululubada ah dhinta Goynta Press Machine
Double-System Computer Flat Tolidda Machine
Fabric Waayo Machine Making funaanad
Machine Flat xidhantay Sinker
Flat Tolidda Machine Waayo qabriga maryo Warshadaha
Flat Tolidda Machine la bixiyaa Good
Flat Tolidda Style Tolidda Machine
Flat Single Jersey Tolidda Machine
Flat sharaabad Tolidda Machine
Full Computer flat Tolidda Machine
Si buuxda u Jacquard Bed Flat Machine Tolidda
Si buuxda u Jacquard Flat xidhantay Machine
Si buuxda u Machine Tolidda
Glove Tolidda Machine
Tolidda Tayada wanaagsan funaanad Computer Machine
Hat Tolidda Machine
Machine Making Hat
Heat Machine Dejinta
Home Machines Tolidda Computerized
Kar Machine Making funaanad
Warshadaha Flat Tolidda Machine
Industrial Glove Samaynta Machine
Insole Machine Qaylkiisa
Tolidda Machine Price
Legging Tolidda Machine
Machine Waayo, dacas Sare
Manual Machine Tolidda Flat
Manual Machine Tolidda funaanad
Ragga funaanad Polo Samaynta Machine
Multi Gaug e Industrial Flat xidhantay Machine
Muslim Cap Tolidda Machine
Machine Hat xoogbadane
Leather pu Embossing Machine
safaleeti Cap Tolidda Machine
safaleeti Tolidda Machine
Shoe Upper Tolidda Machines
Silver Reed Hand Flat Tolidda Machine
Single qaadee Double System
Tolidda Flat Single Machine
Single System Tolidda Machine
Mashiinnada System Single
Single-System Computer Flat Tolidda Machine
Sjg / 562/522/482 Tolidda Machine
sharaabad Tolidda Machine
Stoll Machines Tolidda Bed Flat
Strap Tolidda Machine
funaanad Computer Tolidda Machine
funaanad Flat Tolidda Machine
Ragga funaanad Samaynta Machine
T Daabacaadda Shirt Machine
Universal Flat Tolidda Machine
Upper lifaaqaaya Machine
Dahaarka sare Machine Qabadsiinta
Upper karisid Machine
Dhogor Machine Making safaleeti
Haa Computer Tolidda Machine
Single-nidaam computer mashiinka tolida flat